Mihady volamena amin'ny Web 2.0 | Martech Zone
Asabotsy, Jona 10, 2006 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Niresaka tamin'ny namako akaiky iray aho, Bob Flores, izay mpitarika amin'ny indostrian'ny Telecom. Bob dia mampianatra ireo orinasa momba ny fitarihana orinasa ary manampahaizana manokana amin'ny fananganana fahombiazana amin'ny indostria Telecom. Nanontany ahy i Bob androany hariva hoe inona no eritreretiko ho hevitra lehibe amin'ny Internet manaraka. Ity no eritreritro:
Tsy dia misy vola be azo amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fananganana pejy web fotsiny. Ny Internet dia miray amin'ny haino aman-jery multimedia ary tsy ho ela dia ho orinasa 'tariby' amin'ny planeta manana fantsona miliara. Ny fividianana anarana domaine tsara sy ny fananganana tranokala izay mitondra olona an-tapitrisany maro dia toy ny mividy tapakila amin'ny loteria izao. Mora ity… fa ny mety tsy hamerenanao ny volanao tsy ho ela.
Ireo orinasa goavambe dia miroso hatrany amin'ny fampidirana sy syndication. Raha tokony hanosika ny tranonkalany izy ireo - dia manamora ny fanakanan'ny olon-kafa ny atiny. Ny Washington Post dia eo am-pierena aza - manokatra ny atiny ho atosika amin'izay mangataka izany. Ny Web Consortium aza dia miasa mba hananganana fenitra manodidina ny fizarana vaovao amin'ny alàlan'ny tranonkala… jereo Web Semantic. (Ary a lahatsoratra lehibe momba ny antony maha-sarotra ny Web Semantic).
Ireto misy fotoana mety ahitako azy ireo:
Serivisy fampidirana - Ny SaaS (lozisialy ho serivisy) dia mihalafo sy lafo kokoa ankehitriny. Ny orinasan SaaS tena lehibe ihany no ho afaka miaina satria mihena ny tombom-barotra. Ireo orinasa ireo dia tsy maintsy afaka manitatra be dia be ary manohy manangana fahombiazana sy Fampiharana Application Programming Interfaces (API) na syndication content (RSS). Midika izany fa ny tena vola dia amin'ny fahaizana mampiditra ireo serivisy na atiny amin'ireo rafitra hafa ho an'ny fampiharana mahazatra. Jereo ny lahatsoratra etsy ambony momba ny fanambin'ny Web Semantic dia ho tsapanao fa maninona ianao no hiditra amin'ny indostrian'ny Serivisy fampidirana ho hetsika tsara! Betsaka ny fanamby tsy maintsy resena.
Lohahevitra sy faritra Mashups - Ny tanjaky ny internet amin'ny maha rafitra manerantany dia fahalemena ihany koa. Mora very amin'ny net. Ny zavatra hanjary ho be mpitia dia ny fampiasana Mashups hampiasana API ary hitondra rafitra maro samihafa ho fampiharana rezionaly na lohahevitra. BlogginWallStreet ohatra iray. Family Watchdog hafa. Manana namana iray izay nanampy tamin'ny fanombohana ny Family Watchdog aho. Vao tsy ela akory izay no namaky lahatsoratra iray tao amin'ny BlogginWallStreet. Samy mitombo miandalana ireo. jereo MashupCamp raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny Mashups na mamaky David Berlind ao amin'ny ZDNet.
Fampidirana antsinjarany / eCommerce - fampifangaroana # 1 sy # 2 ity raha ny tena izy, saingy hitako tokoa ny fahafaha-manao lehibe hampitomboana ny varotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranonkala. Alao an-tsaina ny fivarotana akanjo any an-toerana mandefa anao hafatra manokana miaraka amin'ny tapakila azonao alefa amin'ny fivarotana eo an-toerana. Fantatry ny magazay fa nahazo ny tolotra ianao ary manantena anao. Hafa kely kely noho ny fifandraisana amin'ny besinimaro sy ny ezaky ny varotra faobe ataon'ny orinasa manandrana mampiditra anao any amin'ny magazay eo an-toerana amin'ny alàlan'ny doka mivantana na gazety. Eo an-toerana izy io, tafiditra ao ary manokana.
Nandritra ny telefaona dia niresaka izahay fa ny iray amin'ireo sakaizan'i Bob dia HR VP amin'ny fikambanana lehibe ary mampiasa Google izy hanatanterahana ny fizahana azy manokana. Ahoana izany Mashup izany? Manamboara Mashup ahafahako mampakatra resume ary avelao ho azy avy hatrany ny angon-drakitra rehetra azony atao amin'ny olona amin'ny Internet, mandeha bisikileta amin'ny alàlan'ny motera fikarohana maro, bilaogy, tranokalan'ny oniversite, tranokala heloka bevava, sns. hanombohana?
Tags: buisnessdavid berlindfampidiranasaastranonkala semantikahaino aman-jery sosialy2.0 webzdnet
Andro inona izany!